राष्ट्रिय एकमतलाई उपयोग गरौं
भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक नक्शामा के राख्यो, नेपाली राष्ट्रवाद जुरुक्कै बिउँझिएको छ । नेपाली साह्रै सहनशील जात, जब उठ्छन्, आँधीहुरी नै बन्छन् । अति खप्न नसकेर भारतविरुद्ध यतिबेला नेपालभरिमात्र होइन, जति मुलुकमा नेपाली पुगेका छन्, तिनले विश्वलाई नेपालमाथि भारतीय अन्याय, अतिक्रमण र हस्तक्षेपका बारेमा कुरा उठाएका छन् ।
नेपाली एक मत भए । यतिबेला नेपाली राजनीतिमा पनि पार्टीहरु छैनन् । छन् भने नेपालीत्वका लागि एक छन् । ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार छ र सरकारसँगै सबै नेपाली एकतावद्ध भएका छन् । अभूतपूर्व एकता छ नेपालमा नेपालीत्वको बीचबचाउ गर्न । यसैले त नेपाल बहादुरको देश हो ।
नेपाली राष्ट्रियता ज्वारभाटा बनेर उठिरहेको छ । यो ज्वारभाटालाई नेपालीत्व बलियो पार्न, सीमा सुरक्षित राख्न र शान्ति र समृद्धिका लागि प्रयोग गर्ने बेला यही हो । कि त भारतले गरेको नाकावन्दीका बेलामा नेपाली एक भएका थिए, कि अहिले भारतको अतिक्रमण विरुद्धमा । यही बेला हो, नेपालको १८८० किलोमिटर लामो खुला सीमा सुरक्षित पार्ने र नेपाली स्वाभिमानलाई ज्यूँदो छ भनेर विश्वलाई देखाउने । यही बेला हो, नेपाली अन्यायविरुद्ध जहिले पनि एक थिए, छन् र रहिरहनेछन् भनेर देखाउने । नेकपाका लागि देशभक्ति, स्वाधीनता र सार्वभौमका लागि केही गर्ने सुवर्ण अवसर पनि हो यो ।
तर, २ हप्ता बितिसक्यो, सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रिय भएको देखिएको छैन । सीमा अतिक्रमण भनेको एक प्रकारको युद्धकै स्थिति हो, युद्ध थालेकै हो । यो युद्धका बेलामा सरकारका मन्त्रीहरु सार्वजनिक खपतका लागि, आफू पनि छ भनेर देखाउनका लागि भाषणबाजी गरिरहेछन् । परराष्ट्रमन्त्री विज्ञ, विशेषज्ञहरुसँग सम्पर्क गरेर प्रमाण जुटाउनेतिर लागेको देखिदैन, आश्वासनले सीमा साबुत हुन्न भन्ने सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री विरामी छन्, शनिवार पनि उनको डायलायसिस भएको छ । यो बेलामा प्रधानमन्त्रीको भारलाई मन्त्रीहरुले कम गर्दै जिम्मेवारी र जनताप्रति जवाफदेही काम गर्नैपर्ने हो । मन्त्रीहरु अकर्मण्य भएपछि कर्मचारीतन्त्र सक्रिय हुने कुरै भएन । कर्मचारीको एकमात्र उद्देश्य नै कमिशन र घूस बटुल्नु रहेको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्न नसक्नु नै सुशासन हुन नसक्नु हो । यही बुझेको भारतले नेपाललाई हेपिरहेको छ, अतिक्रमण बढाउँदै लगेको छ ।
नेकपाको इतिहासमा यति शक्तिशाली सरकार बनेकै थिएन । नेकपाको इतिहासमा नाकावन्दीजस्तो राष्ट्रियताका लागि उभिने अवसर पनि आएको थिएन, नेकपाको इतिहासमा नेपालको रक्षा गर्ने यति गहन जिम्मेवारी पनि पहिले कहिल्यै आएन । अवसर र चुनौती अव आएको छ । नेकपामाथि प्रश्नगर्ने सबैलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र जनभावनाअनुरुप काम गरेर सतीसाल पार्टी हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ । नेकपाले अहिले काम नगरे, कहिले गर्ने ?
यो बेला भाषण गर्ने होइन, सार्वभौमिकता बचाउने समय यही हो ।
अन्तमा म पनि अधिवक्ता ः ज्यूँदा मान्छेलाई इटाभट्टामा कोइला, दाउरा बालेझैं बाल्ने आरोपमा मोहमद अफताव आलम जेल पुगेका छन् । अनुसन्धानले प्रमाणित गर्ला तर यति क्रुर पाशविक हत्याकाण्डमा आरोपीका पक्षमा वकालत गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन ? पहिले बर्बर भनिरहेको घटनामा आज वकालत गर्दै भनिरहेका छन्– यो व्यवसाय हो, जसको पनि बहस गर्न मिल्छ । वकिलको सामाजिक दायित्व हुन्छ कि हुन्न ? भए कति हुन्छ, कस्तो रङ्को हुन्छ ?